ဗေဒင်မေးရမည့် ဂျူလိုင်လအတွက် ဖတ်ရွေးဆုရှင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ဗေဒင်မေးရမည့် ဂျူလိုင်လအတွက် ဖတ်ရွေးဆုရှင်
ဗေဒင်မေးရမည့် ဂျူလိုင်လအတွက် ဖတ်ရွေးဆုရှင်
Posted by ဦးကျောက်ခဲ on Aug 9, 2014 in Best Web Awards, Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary, Myanmar Gazette | 68 comments
မင်္ဂလာပါခင်ဗျ… “ဦးကျောက်ခဲမေတ္တာဝေတယ်… ဂဇက်ပရိတ်သတ်တွေ ပန်းနာထကြပါစေ”လို့လည်း ရက်ရက်စက်စက် မေတ္တာမပို့ရက်ပါဘူး ၊ အားလုံးပဲ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။ ဦးကျောက်ခဲ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြောရရင်တော့ ဒီရက်ထဲမှာ အလုပ်က အားသလိုလို မအားသလိုလိုခင်ဗျ ။ ဒီတော့လည်း ထုံးစံအတိုင်း တောအကြောင်း တောင်အကြောင်း ပြောဖော်ပြောဖက် ဂဇက် ဖတ်ရွေးဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြီးမိုက်ကို လှမ်းငြိရတာပေါ့ခင်ဗျာ ။ ကိုယ့်အသက်အရွယ်ကလည်း ဟိုမကျသည်မကျဆိုတော့ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ဦးကြီးမိုက်နဲ့ အဖွဲ့ကျတာလည်း မဆန်းလှပါဘူး ။ တကယ်တော့ ဂဇက်ဆိုတာ သဘောမတူတာရှိရင် ငြင်းကြခုန်ကြ ဖဲ့ကြရွဲ့ကြပေမည့် နှလုံးသားချင်းနီးစပ်သူတွေ စုစည်းမိတဲ့ အွန်လိုင်းပေ့ခ်ျ မို့ အချိန်တန်တော့လည်း ပြီးသွားတာပါပဲ ။ အခုလည်း စပ်စုချင်တာလေး ရှိတာမို့…
“ဗျို့… ဥက္ကဋ္ဌဂျီး ဆြာမိုက်… ကျန်းခန့်သာလို့ မာတော်မူပါစ”
“ဟေ့လူ ကိုကျောက်… ကျုပ် လူ နေကောင်းတယ် ၊ ဒါပေမယ့် စိတ် နေမကောင်းဘူး ။ ခင်ဗျားကျုပ်ကို ဥက္ကဋ္ဌဂျီးလို့ နောင်မခေါ်ပါနဲ့ ၊ ကျုပ် ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး သူများအမြင်ကပ်ခံရတဲ့ အဲဒါကြီးကို မလုပ်တော့ဘူး”
“ဟာဗျာ… ဒီလောက်လေး စ မိ နောက်မိတာ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ငှက်ကထဂျီးရယ်”
“တင်းဒယ်ဗျ … တင်းဒယ် ။ ဂဇက် သာရေးနာရေးအဖွဲ့လေးလည်း ပျက်မှာစိုး ၊ ခင်ဗျားတို့လည်း အတင်းဝိုင်းတွန်းလို့ လုပ်ရတာ ။ အခုတော့ စိတ်ကုန်ပြီ”
“အဲ… အဲ… ပစ္စည်းမဲ့ဒေါသတွေ ကျောက်စ်ဘက်ကို လှည့်မလာပါနဲ့ ဆရာသမားရယ် ။ ဂျူလိုင်လအတွက် ဖတ်ရွေးအကြိုက် ဘယ်သူများရသလဲ မေးချင်လို့ပါ”
“ဟမ်… ဥက္ကဋ္ဌမဟုတ်တော့လို့ ကျုပ်လည်းမသိသေးဘူး ၊ သိချင်ရင် အကြားအမြင် ဗေဒင်သာမေး ၊ သွား မေးရင် ကျုပ်ကိုလည်း အဖော်ခေါ်ဗျ ။ ဟောသည့်မှာတော့ ဆန်ကာတင် စာရင်းပဲ” ဟု ဆိုပြီး အောက်ပါစာရင်းအား ဦးကျောက်ခဲကိုပေးပါတော့တယ် ။
၂၀၁၄ ဂျူလိုင်လအတွက် ဖတ်ရွေး ဆန်ကာတင် စာရင်း
၁။ မရိုးနိုင်သော တစ်ညတာများ – Nyo Win
၂။ မောင့်ဗစ်တိုးရီးယား – pooch
၃။ ရွှေတြိဂံသို့ အလည်တစ်ခေါက်(၁) မှ (၈) – wei wei
၄။ ဖြတ်သန်းခဲ့သော ပလက်ဖေါင်းများ – ကိုပေါက် (မန္တလေး)
၅။ ပုလင်းနက် နှစ်လုံး – မောင်ဘလှိုင်
၆။ ညငှက်တစ်ကောင်ရဲ့ ရင်ဖွင့်သံ – l u lu
၇။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကို စွန့်ခွာကြသူများ (ညီမလေးဖတ်ဖို့) – htet way
၈။ ၀န်ရှင်တော်ရွှေဖလား – marblecommet
၉။ ညီလေးအလင်းဆက်နှင့် မြန်မာစာချစ်သူ…..(၂) – ရွှေညာသား
၁၀။ လူဆိုး လူမိုက်ကြီးရဲ့ သမီးရေးတဲ့စာ….Her experiences – kyeemite
၁၁။ ဂျိုး စာစုများ – marblecommet
၁၂။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ယဉ်ကျေးမှု – Teashop ရိုးရာ – ဇီဇီခင်ဇော်
၁၃။ ည မဆန်တဲ့ ည – Mr. MarGa
ဟိုက်ရှားဘား ဆန်ကာတင်ရွေးထားတာတွေကလည်းရှယ် ၊ ကိုယ့်ဖာသာဖတ်ပြီး ဘယ်ပို့စ် ဆုရနိုင်မယ်ဆိုတာကို မမှန်းဆနိုင်လို့ ဆြာမိုက်ကို မေးခါမှပဲ “ထောင်မင်းကြီးကယ်ခါမှ ထောင်လုံးလုံးကျကိန်း”ကို ရောက်တော့တယ် ခင်ဗျ ။ ကြိုသိချင်ရင် အကြားအမြင် ဗေဒင်သာမေး ဆိုတော့ … အဲဒါမှအခက်ကြုံတာပါပဲ ။ တကယ်တော့ ဦးကျောက်ခဲက ဗေဒင်ပညာကို ယုံတယ်လည်းမဟုတ် ၊ မယုံဘူးလည်းမဟုတ် … ဟိုလိုလိုသည်လိုလိုပါ ။ ဘာရယ်မဟုတ် စိတ်အပန်းပြေတယ်လို့ သဘောထားပြီး လမ်းကြုံရင်မေးလိုက်တာကလွဲလို့ ဘာမှစွဲစွဲလန်းလန်းမရှိပါဘူး ။ အတိတ်ကိုဟောရင် ပြုံးနေလိုက်တယ် ၊ ဟုတ်တယ်လေ … ကိုယ်ဖြစ်ခဲ့တာကိုယ်အသိဆုံး ။ အဲသည်တော့ ကိုယ့်အကြောင်း ကောင်းတာပြောရင် ပီတိဖြစ် ၊ မကောင်းတာပြောရင် ဤဗေဒင်ဆရာ ဟောကိန်းမမှန် လို့ သဘောပိုက်လိုက်တာပဲ ။ အကောင်းအဆိုး ဘာမှစိတ်ထဲမရှိပါဘူး ၊ ဥပါဒ်ဒဏ်ကြောင့် ဥပါဒ်ရောက်တတ်သတဲ့ ။
ဒီနေရာမှာ စကားလမ်းကြုံလို့ ဖောက်သည်ချရရင် ဦးကျောက်ခဲထက် အသက်ကြီး ဝါကြီးတဲ့ ကိုဇော်ကြီးဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ဦးကတော့ အတော်လေးကို ဗေဒင်မေးတာဝါသနာထုံပါတယ် ။ ယောက်ျားတန်မဲ့ ဗေဒင်လျှောက်မေးတယ်ဆိုရင်လည်း ခံရမှာပဲ ၊ သူကိုယ်တိုင်က လွန်လွန်ကြူးကြူးကိုး ။ ဆိုရရင်တော့ နာမည်ကြီး ဗေဒင်ဆရာဆိုရင် မမေးဖူးတဲ့သူမရှိသလို ၊ ဗေဒင်မှန်သတဲ့ဆိုတာနဲ့ တပွဲတလမ်း အကဲစမ်းဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတတ်တဲ့ အစ်ကိုကြီးပါ ။ အနှီ ကိုဇော်ကြီး ဗေဒင်အမေးကောင်းလို့ မဟာအရှက်တော်ကွဲခဲ့ရဖူးတဲ့ဇာတ်လမ်းမှာ မောင်ကျောက်ခဲလည်း ဆွမ်းခံရင်း ငှက်သင့်ဖူးတာမို့ အခု ဦးကြီးမိုက်တိုက်တွန်းတော့ အတော် ကျောချမ်းသွားပါတယ် ။
ဦးကျောက်ခဲရဲ့ ဖြစ်အင်ကို ပြန်ပြောရရင်တော့ လွန်ခဲ့သော ၁၉၉၁ခုနှစ် ဝါလကင်းလွတ်တဲ့ သီတင်းကျွတ်ပြီးအခါသမယပေါ့ခင်ဗျာ…
အိမ်ထောင်ပြုချင်နေရှာတဲ့ ကိုဇော်ကြီး သူ့ဘော်ဒါတွေကို အဖော်စပ်မရလို့ မောင်ကျောက်ခဲကို ထုံးစံအတိုင်း ဗေဒင်မေးသွားဖို့ အဖော်ခေါ်ပါတယ် ။ မောင်ကျောက်ခဲကလည်း ကားဆီ လူဆီ ဒကာခံမယ်ဆိုရင် မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းတောင် လိုက်ရလိုက်ရဆိုတော့ သူပေးတဲ့လိပ်စာအတိုင်း မြောက်ဥက္ကလာအဝိုင်းကြီးနားက ဗေဒင်ဆရာအိမ်ကို ချီတက်ကြတာပေါ့ ။ လိပ်စာထဲကအတိုင်း လမ်းသွယ်အတွင်းကိုဝင်မိတယ်ဆိုရင် ဟိုအိမ်သည်အိမ်က စူးစမ်းတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ ကြည့်ကြတယ်ခင်ဗျ ။ မောင်ကျောက်ခဲလည်း နှစ်လိုဖွယ်အပြုံးကိုဆောင်ပြီး “ဗေဒင်ဆရာကြီး ဦးလူအေး” ရဲ့အိမ်ကို မေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ မောင်ကျောက်ခဲရဲ့အပြုံးထက် သာလွန်တဲ့အပြုံးတွေနဲ့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ နတ်လမ်းညွန်လုပ်လို့ အိမ်အထိလိုက်ပို့ကြပါတယ်…။ မောင်ကျောက်ခဲတို့စိတ်ထဲမှာတော့ ဤ ရပ်ကွက်သူရပ်ကွက်သားများသည် မြန်မာပီပီ အလွန်လူမှုရေးသိတတ်ပေစွ အလွန်ကူညီတတ်ပေစွ … လို့ပေါ့ ခင်ဗျာ ။
ညွှန်လိုက်တဲ့အိမ်ဂေဟာကိုရောက်သွားတော့ ဗေဒင်ဆရာကြီး ဦးလူအေးကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်တွေ့ပါတယ် ၊ ပိန်ပိန်ပါးပါး အငြိမ်းစားကျောင်းဆရာကြီးပါ ။ လာရင်းကိစ္စကို အတိုချုံးပြီးရှင်းပြတော့ အတော့်ကို တိုးညှင်းတဲ့ အသံနဲ့ ပညာကြေး ငါးကျပ်တစ်မတ် တင်ခိုင်းပါတယ် ၊ ဟောတာမှန်ရင် သဒ္ဒါသလောက် ထပ်ပူဇော်ပေါ့ခင်ဗျာ ။ ပညာကြေးပူဇော်အပြီးမှာတော့ ဆရာကြီးက “ငါ့တူတို့… အဘက ဗေဒင်ဟောရင် အသံကျယ်တယ်ကွယ် ။ နောက်ပြီး အဘဟောလို့ မပြီးမချင်း ထွက်မသွားရဘူး” လို့ သူ့စည်းကမ်းကိုပြောတယ်ခင်ဗျ ။ အဟတ်… အခုတောင် သူပြောနေတာကို မနည်းနားစိုက်ထောင်နေရတာ ၊ အသံသာ မကျယ်လို့ကတော့ ငုတ်တုတ်ငိုက်ကိန်းရှိတာမို့ … “အားမနာပါနဲ့ခင်ဗျ အဘစိတ်ကြိုက်သာဟောပါ ၊ ကျနော်တို့ ဗေဒင်မေးဖို့လာတာ ဘယ်ကိုမှ ထွက်သွားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး” လို့ ကိုဇော်ကြီးက ဝမ်းသာအားရ ကတိပေးပါတယ် ။ ဆရာကြီးလည်း ၃ကြိမ် ၃ခါ မေးအပြီးမှာတော့ အိမ်တံခါးကို ဂျက်ချ ၊ ဘုရားစင်ရှေ့က ဗေဒင်စားပွဲမှာထိုင် ၊ ဟိုခြစ်သည်ခြစ် ခြစ်ပြီး ၊ အားရပါးရ လော်စပီကာကွဲလောက်အောင် အသံဝါကြီးနဲ့ အော်လိုက်တာက …
“အင်္ဂါသား အထွန်းဖွား မောင်ဇော်ကြီး ၊ မွေးနက္ခတ်က လူနက္ခတ် ။ ရတနာသုံးပါးဦးထိပ်ထား… မမှန်ရင် အလျော်ပေးမယ့် ဟောသည့်က ဆြာလူအေး … အဟောခန်းဖွင့်မယ်ဟေ့”
ဆိုင်းမပါ ဗုံမဆင့် အနှီ ပိန်ပိန်သေးသေး ဆရာကြီးဦးလူအေးနှုတ်က ဂေါ်ဇီလာလောက်အသံကြီးထွက်လာတာမို့ ကိုဇော်ကြီးရော မောင်ကျောက်ခဲရော အတော်ဖြုံသွားတယ်ခင်ဗျ ။ ကိုဇော်ကြီးလည်း လန့်သွားတဲ့အမူအယာကိုပြင်ရင်း…
“အဲ အဲ … ဒီလောက်မကျယ်လည်း ကျနော်တို့ ကြားရပါတယ်ခင်ဗျ ။ ဆရာကြီး သက်သက်သာသာဟောပါ” လို့ လေချိုသွေးလိုက်တော့…
“ဟေ့… မောင်ရင်တို့… လူအေးက ပညာမလျှိုဘူး ၊ မာန်နဲ့ ဋ္ဌာန်နဲ့ဟောတတ်လို့ မောင်ရင်တို့ကို သဘောတူလားလို့ မေးပြီးသား ။ မရဘူး… အခုဆက်ဟောမယ်….”
တကယ်ပါခင်ဗျာ တားမနိုင် ဆီးမရ ၊ အဲသည့်ဆရာကြီး ဟောလိုက်တာ ကိုဇော်ကြီးဖင်မှာ ဝဲရှိတာရော ၊ သောကြာဂြိုလ်ခုံမောက်ပြီး ရာဇမတ်ကွက်တောင်ပါသတဲ့ဆိုတာရော ၊ စိတ်ကူးအတော်ယဉ်တတ်တယ်ဆိုတာရော ၊ သူ့ကောင်မလေးက အစားပုတ် အအိပ်မက်ဆိုတာရော ၊ အပျင်းထူပြီး အလှမက်တယ်ဆိုတာရော… ကောင်းတာတွေရော မကောင်းတာတွေရော စုံလို့ပါပဲခင်ဗျာ ။ မောင်ကျောက်ခဲကတော့ ကာယကံရှင်မဟုတ်လို့ ဘေးကနေ တခွိခွိရယ်နိုင်ပေမယ့် ကိုဇော်ကြီးခမျာမှာတော့ မျက်နှာကြီးရှုံ့တွနေတာ ခရမ်းသီးကို နေလှမ်းထားသလိုပါပဲ ။ အားရပါးရ သူမြင်တာတွေကို ဟောအပြီး “မောင်ရင် ဘာသိချင်သေးလဲ” ဆိုတော့ ကိုဇော်ကြီးလည်း အထွန့်မတက်နိုင်ပဲ “ပြည့်စုံပါပြီ” ဆိုပြီး ပြာပြာသလဲ ပြန်ဖြေပါတယ် ။ မောင်ကျောက်ခဲကို ဟောပေးမယ်ဆိုတော့ … “ကျနော် ဘာသာခြားပါခင်ဗျ” လို့ လိမ်တုတ်ရတာပေါ့ … မဟုတ်ရင် အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ရှက်စရာကြီးလေ ။
မောင်ကျောက်ခဲ မဟောခိုင်းမိတာ ကံကောင်းတယ်ခင်ဗျာ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဦးလူအေးအိမ်က ပြန်အထွက် အိမ်ရှေ့မှာ ရပ်ကွက်ထဲကမိန်းမတွေအစ ဆိုက်ကားဆရာအဆုံး ပရိတ်သတ်က မနည်းဘူးခင်ဗျ ။ အပြုံးပန်းတွေ ဝေဝေဆာဆာနဲ့ ဆရာဦးလူအေးရဲ့ ကိုဇော်ကြီးကွက်စိပ်ကို နားသောတဆင်နေကြတာလေ ။ အခုမှသဘောပေါက်တယ်… အဲဒါကြောင့် လိုလိုလားလားနဲ့ ဆရာကြီးရဲ့အိမ်ဂေဟာကို “အရောက်ပို့”တာကိုး ။ မောင်ကျောက်ခဲကတော့ မရှက်စဖူး ရှက်သွားပေမယ့် ရှေ့မျက်နှာ နောက်ထားလို့ ဟန်ကိုယ့်ဖို့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ကားရှိရာကို သွားတဲ့အချိန် ကိုဇော်ကြီးကတော့ မျက်နှာကြီးနီရဲပြီး ခေါင်းငိုက်စိုက်ချလို့ အနောက်ကနေ လိုက်လာပါတယ် ။ အဲသည့်မှာ ရွှတ်နောက်နောက် ရပ်ကွက်ထဲက အမျိုးသမီးတွေ မကြားတကြားပြောပုံက…
“ဟယ်… မထင်ရဘူးနော် ၊ ဖင်မှာ ဝဲရှိသတဲ့… အဟိ အဟိ”
“အမလေး ကြောက်စရာကြီး ၊ သောကြာဂြိုလ်ခုံမှာ ရာဇမတ်ကွက်တောင်ပါသတဲ့တော်ရေ့”
“….xo x iii xoo xiii….”
အနှီကဲ့သို့ စုံစီနဖာ ဝိုင်းဝန်းအားပေးလိုက်ကြတာကြောင့် မောင်ကျောက်ခဲနဲ့ ကိုဇော်ကြီးလည်း ထူပူပြီး ကားမောင်းထွက်လာလိုက်ကြတာ မြောက်ဥက္ကလာအဝိုင်းကြီးနားလောက်ရောက်မှ သတိပြန်ကပ်ပါတယ် ။
အခုလည်းဗျာ “၂၀၁၄ခု ဂျူလိုင်လအတွက် ဖတ်ရွေးဆုရှင်” ဘယ်သူလဲဆိုတာကို စပ်စုချင်စိတ်က ထိန်းမနိုင်တားမရ ၊ ဆြာမိုက်က သူလည်းမသိဆိုတော့ … သူအကြံပေးသလို အကြားအမြင် ဗေဒင်မေးရကိန်းကို ဆိုက်နေပြီလေ ။ အိုဗျာ… ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်… ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ကျော်လောက်က အဖြစ်ဆိုးလို မဟာ့မဟာအရှက်ကွဲကိန်းတော့ မရှိလောက်ဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားတင်း… ဆြာမိုက်ကို အဖော်ပြုပြီး အကြားအမြင် ဗေဒင်မေးဖို့ ချီတက်ရတာပေါ့ခင်ဗျာ…။
ဟုတ်ကဲ့… ဒီတခါမေးမယ့် ဆြာက… ဂဇက်တခွင် ပြဲပြဲစင် ၊ မ တစ်လုံးကြေ မသိတာမရှိ ၊ နတ်ပင့် နတ်တင် ၊ ခေါစာကျွေးတာပါ အထူးကျွမ်းကျင်တဲ့…
“ပုံစားဆရာဂျီး အွန်လိုင်းဗေဒကဝိ ဆြာဆာမိ” ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား….
မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ တင်ဆက်မည့် “ဧဝံမေသုတံ – ၂၀၁၄ခု ဂျူလိုင်လအတွက် ဖတ်ရွေးဆုရှင်” ကို စောင့်မျှော်ကြပါလို့…
-ဖတ်ရွေးဆန်ခါတင် ကြေငြာတဲ့ မောင်မင်းကြီးသား အမောင်ကျောက်စ် အား အထူးကျေးဇူးတင်ပါ၏
ငှက်ကဥ ကြီး လို့ပဲ ခေါ်မယ်။
ဆုံးအောင်ဖတ်ပြီးမှ ကျေးဇူးတင်ပါ ငှက်ကထဂျီး…
အဟိ… ဘာရမလဲ ကြုံတုန်း အချွန်နဲ့ မ မယ်…
(ဟို LT ကြီး မဟုတ်ဘူးနော်… အားဟိ)
“ပုံစားဆရာဂျီး အွန်လိုင်းဗေဒကဝိ ဆြာဆာမိ” ဆိုရင်တော့ မှန်မှာ သေချာပြီ
ဒီနှစ် အဲ့ ဗေဒင်ဆရာ အတော်လေးကို မှန်နေလေရဲ့
သင်္ကြန်စာကနေ စ ပြီး ဗေဒကဝိ ဆြာဆာမိ ရယ်လို့ ဟော်ဟော်ကျိုး ဟိုးဟိုးကျော်လာတာ အခုဆို သူနဲ့တွေ့ချင်ရင် ကြိုတင် ဘွတ်ကင်တောင် လုပ်ရတယ်ဆိုလားပဲ
အနှီ ဆြာဆာမိ ကန်ဘာ့ဖလားမှာ အသီးခွဲထားလို့ အခု ပြန်လက်စားချေမလို့…
ပြောမပြရင် စိတ်ဆိုးလိုက်မှာနော် ဆြာကျောက်။
ဘာတဲ့ဆိုတာ ပြောလည်းပြောမယ်… ပြလည်းပြမယ်… စိတ်မဆိုးလိုက်ပါနဲ့…
ရက်ပိုင်းလေးတော့စောင့်ပါ ဆြာခရယ် ၊ ဗေဒင်ဆြာ ဓာတ်နန်းဝင်နေလို့…
ဟေးဟေး ဂွင်ဘဲကွ !
အဲ အဲ တစ်ခုတော့ကြိုပြောထားမယ် ဆြာကျောက်နဲ့ ဆြာမိုက်ရေ …
တဲရော့ကဒ်လေးတွေ အနားယူတဲ့နေ့တော့မလာကြနဲ့နော …
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဆန်ကာတင် ပို့စ်လေးတွေကြည့်ပြီး စိတ်ထဲတော့ရွေးနေမိသားဗျ ။
ပြောရရင် ကိုယ်ကြိုက်တာတွေကလည်း အကုန်နီးပါး ဆိုတော့ ………
အခုလို ပျော်ပျာ်ပါးပါး ရွှင်ရွှင်မြူးမြူးနဲ့ အစီစဉ်တင်ဆက်ကြေငြာလိုက်တော့လဲ
ပြုံးလိုက် ရီလိုက် ရင်ခုန်လိုက်ပေါ့ဗျာ
ဟာ ဗေဒင် ကဝိ လာပြီ။
ဒီ ဆရာမှန်လွန်းလို့ သများ ပုန်းနေရတာပဲကြည့်!!
ဂဇက်ထဲက ဖြစ်အင်တွေ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် သိစေချင်လို့လာတာ…
တဲရော့ကဒ်လေးတွေ အနားယူနေတယ်တော့ မလုပ်ပါနဲ့ ဆြာဆာမိရယ်…
ဘယ်ပို့စ်က ဖတ်ရွေးအကြိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ အတိအကျဟောပေး…
အဟိ… ဒါပဲနော် ရှေ့ပို့စ်မှာ တင်မှာတွေက ဆြာဆာမိ ဟောထားတာတွေ…
ကျောက်စ်နဲ့… ဘာ… ဘာ… ဘာမှမဆိုင်… အားဟိ
တော်တော်များများတော့ စာဂျဘိုးဂျီးတွေ ဒီ ထဲမှာ ညွှန်းထားတာမို့ တွဲဖတ်ချင်ရင် ဖတ်လို့ရတယ်။
ဆရာ ညို နဲ့ သကြား ပို့(စ) ကို နေ့လည် အညွှန်းရေးပေးမယ်နော်။
စာမရေးတတ်လို့ ဇွတ်ငြင်းပြီးမှ ထ ရေးတဲ့ လူဂျီးရဲ့ ပို့(စ) ပါတော့။
ရေးတတ်တယ် ပြောပြီး ရေးတဲ့ ရဲဇားစာသာဆိုရင် ဒီ လူဗျိုဂျီး ကို ခိုးပြေးမဲ့သူ အတော်များမှာရယ်။
(သူ ကိုယ်တိုင်ကတော့ ကြောက်တတ်တယ်လို့ ဆိုထားဖူးလို့)
ရုံးကနေ အိမ်ပြန်နောက်ကျပြီး စင်တင်ပါတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကို သွားဖြစ်တဲ့ တစ်ည မှာ မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းတို့၊ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက်တို့ကို ရေးထားတာပါ။
ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပို့(စ) အရေးအသားကို ထောက်ရင်တော့ ဒီလို ညမျိုးက ဒီတစ်ညတည်း ဟုတ်ဟန်မတူဘူးးး
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီ လူအေးဂျီး(လို့ထင်ရတဲ့ လူဂျီး) ဆီက ဒီလို စကားလုံးမျိုးနဲ့ ဒီလို ပို့(စ) ထွက်လာတာ ကြိုဆိုရမှာပါ။
ပီအက်(စ) – ကိုညို၊ … လက်ဖက်ရည် ၂ ခွက်နော်။
“အင်္ဂါသား အထွန်းဖွား မွေးနက္ခတ်က လူနက္ခတ် ။ ” ခွိ ကိုယ်နဲ့ မှဒက်ထိဗျာ..
ဒီလူကြီး ဆြာကျောက် ကိုဇော်ကြီး အကြောင်းပြပီး ကိုယ့် တီးနေသလားထင်ရ..ဟီးဟီး
ဆြာလူအေးဆိုတဲ့နာမည်တွေ့ ရင်တော့ ရှောင်နေမှ..
“ပုံစားဆရာဂျီး အွန်လိုင်းဗေဒကဝိ ဆြာဆာမိ” နဲ့ တွေ့ မှပဲမေးတော့မယ်….
အဲ့ဒီ ကုမ္ပဏီမှာလုပ်တုန်းကညတိုင်းနီးပါးပါပဲ..အဲ့အချိန်မှအားတော့စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ 
မူးလာရင်တော့…..သီချင်း ချည်း ဆိုချင်လို့ KTV သွားဖို့ ဂျီကျတာလေးတခုပါပဲ….
လက်ဖက်ရည် ၂ ခွက်ဆိုရင် တော်ပြီလား..
ဖိုးသိုးဖတ်သတ်… ဆြာညိုကို မှန်သွားသဂိုး…
နောက်တခါ အဲသည့်လိုညတွေကို တွေ့မယ်ဆို…
ဗရာဗိုပါ ဆြာညိုရေ့ …
မန်းလေးမှာ ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ်တဲ့ ကာလ ထဲက
ညတစ်ညမှာ အိမ်ကို စောစော ပြန်ရောက်ပြီး
အိမ်ကို ပြန်ရောက်တဲ့ အချိန် ပတ်ဝန်းကျင် က သာယာသံ အမည်ခံ အသံတွေပေါင်းစုံ တွေကြားမှာ ညရဲ့ တိတ်ဆိတ်မှုကို စိတ်က လိုလားတောင့်တနေမှုကို
(အသက်နဲ့မလိုက်) စကားလုံး ခန့်ခန့်တွေနဲ့ ရေးသွားတဲ့ ရသ ပို့(စ) တစ်ခုပါ။
သကြားရေးခဲတဲ့ ပို့(စ) မျိုးမို့ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
သူ့ ဂျီးဒေါ် ဇီ
ပီအက်(စ) – တဂျားး ဘီယာ ၂ ခွက်နော်။
အဟိ… သံကွန်ခြာမိဇာဂျီးက အဲဒါတွေ အားကိုးရတာ…
ဟိုဂျပိုးကြီးတွေကိုလည်း အားဖြည့်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါဦး…
ခြမင်းသားကျောက်စ် (စာအုပ်မှန်ရင် အကုန်စား၏)
သများက သံကွန်ခြာ ဘယ်တုန်းက ဖစ်သွားတာလဲ။ အဲ ဒီ နာမည်လည်းကြိုက်တယ်။
နောက် စိတ်ပါရင် ပြောင်းမယ်နော်။
အဓိပ္ပာယ်က သံကွန်ခြာ ၇ ထပ် တောင် မနိုင်အောင် ဖလန်းတာကို ပြောတာလားဟမ်?
အစည်းအဝေးတက်တယ် ဆိုပြီး အစည်းအဝေးခန်းထဲကနေ မက်စေ့တွေ ပို့နေတယ်။
ဂျဘိုးလေးတွေ ဘာလုပ်နေလဲ တော့ မသိ။
ချ (အဲလေ) ခြ ရယ် ရှိပြီးဆိုတော့ ပိုးဟပ် လိုသေးတာပေါ့နော်။
စာပေလောက ကြီး အတွက်။
အဲ့ဒီ ဗေဒင်ဆရာဂျီး ဦးလူအေးက
အကျယ် ပဲ ဟောတတ်တာပေါ့နော်။
နားထဲ ဂွမ်းဆို့ပြီး နားထောင်ရမယ့်ပုံ
ဒါမယ့် အနော့်ပိုစ့်တွေက လွဲရင် အနော်အကြိုက်ဆုံးပိုစ့်တွေ ပါတယ်
(အနော့်ပိုစ့်တော့ အနော်အကြိုက်ဆုံးပေါ့။ )
ဘာပဲ ပြောပြော ရပ်ကွက်က ဒီ လို ဗေဒင် ဆရာ တစ်ယောက် အပိုင်ရတာ ဘယ်လောက် ပျော်စရာကောင်းလဲ။
ပျင်းရင် ဗေဒင်မေးမဲ့သူရှာပြီး သူ့ဆီ အရောက်ပို့။
သများကို ဟောရင် အကျယ်မဟောပါနဲ့။
တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပဲ အွန်လိုင်းမှာ ဟောစာတမ်းရေးတင်လိုက်ပါ ဆိုပြီးးးးးး
ဝမ်းမနည်းပါနဲ့ ဒညင်းဝက်ရယ် … ဝမ်းနည်းရင် ဆြာမိုးဆောင်ထား…
ရေးမည့်သာရေးရတာ ဦးကျောက်စ်ပို့စ်တွေလည်း ဆန်ကာတင်ထဲတောင်မပါ…
အဲဒါကြောင့်… ဖတ်ရွေးတွေကို ကလော်မလို့… အဟိ အဟိ
“ပုံစားဆရာဂျီး အွန်လိုင်းဗေဒကဝိ ဆြာဆာမိ”ရေ…
-ကျုပ်နဲ့ ကျောက်စ် ဘယ်နေ့လာတွေ့ရမလဲဗျ…ရက်ချိန်းလေးမစပါအုံး
တဲရော့လေးတွေက တစ်ပတ်မှာ ၈ ရက် နားတယ်ဗျ
မမှန်တော့လည်း သူနားနေလို့ပါ ပေါ့
ဗေဒင်ဝိဇ္ဇာ တားရော့ဆာ တို့မှန်ချက်ကတော့ မျက်ရည်ထွက်လောက်ပါတယ်ဗျို့
အဟိ… မတ်စိအတွက် ကျတဲ့မျက်ရည်တွေခမ်းပြီလား…
ဂျူလိုင်လအတွက်ကတော့ သူ့ထက်သူ လူစွမ်းကောင်းတွေချည်းပဲ…
ဖတ်ရွေးထဲမှာတောင် မဖတ်ရသေးတာတွေ ခုမှ သေချာဖတ်ရတော့တယ်။ အားလုံးကို ကြိုက်တယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ အတော်ခေါင်းခဲမယ့် ပိုစ့်တွေကြီးပဲ။ ဗေဒင်မေးရင်တောင် ဗေဒင်ဆရာ ထွက်ပြေးမလားပဲနော်။
ဲရော့ဖဲထုတ်လေး တစ်ချက်ဆွဲလိုက်ရင် အေးဆေး
ဖတ်ရွေးတွေလည်း အားလုံးကိုကြိုက်လို့ ခေါင်းခဲနေပါသတဲ့…
ဗေဒင်ဆြာကိုတော့ ထွက်မပြေးနိုင်အောင် ကြိုးတုတ်ထားမှ… အဟိ
ဦးကျောက် စာဖတ်မိတော့မှ ရွာထဲ ဝင်ပြီး စာဖတ်ချင်စိတ် ပေါ်လာတော့တယ်..
ရွာထဲက ဒါးသံ သေနတ်သံတွေ တိတ်သွားပလားလို့ ဝင်ချောင်းကြည့်တာ..
တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်နေရင် ဝေးဝေးက ရှောင်နေမှ …
သောမနဿ ဖြစ်တဲ့ စာဘဲ ဖတ်ချင်တာ..
မဟုတ်တာတွေဖတ်ပြီး ဒေါသ ထွက်ရမယ်ဆို မဖတ်မိတာက ကောင်းတယ်မလား…
ငြ်ိမ်းချမ်းရေးခိုတွေတော့ တဖြတ်ဖြတ် လွှတ်ပေးနေတာဘဲ
ဒါပေမယ့် လေးဂွစာမိပြီး ဒယ်အိုးထဲရောက်သွားလို့ပါ
စာဖတ်ပြီး စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရ ဒေါသထွက်ရရင် မနိပ်သေးဘူး အကိုကြီးရဲ့…
တစ်ခါတခါ ဂဇက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့ခင်ဗျာ…
အောင်မယ်လေးရီလိုက်ရတာ တခွိခွိနဲ့။ ဖတ်ရွေးပိုစ့်တွေတောင်မေ့သွားလို့ အပေါ်တခေါက်ပြန်တက်လိုက်ရတယ် လက်ခုပ်တီးရန်အဆင်သင့်ပါ
အာဟင့်… အဲသည့်အချိန်တုန်းကတော့ မောင်ကျောက်စ်ခမျာ မရယ်နိုင်ခဲ့ဘူး…
ရှက်လွန်းလို့ အရှင်လတ်လတ် အငွေ့သာဖြစ်လိုက်ချင်တယ်… ဂွီ
ရက်များမကြာမီ လက်ခုပ်တီးဖို့ အသင့်ပြင်ထားပါခီညာ… အဟွတ်
ဦးကျောက်စ်သူငယ်ချင်းက တော်တော်အ… တံခါးပိတ်ဟောတာပဲ ဘယ်သူက ဇော်ကြီးမှန်းသိတာ မဟုတ်.. သများသာဆို ခပ်တည်တည်နဲ့ ဦးကျောက်စ်အထင်ခံရအောင် မျက်လှည့်ပြခဲ့မှာ..
အဟတ်စ်… အဲသဟာတော့ လွဲဘီ… အဲ့တုန်းက ကျောက်စ်က ငယ်ငယ်နုနု…
ကိုဇော်ကြီးက အသက်အစိတ်ကျော်… ထင်ချင်းထင်… သူ့ပဲထင်မှာပေါ့… ခွိ ခွိ
အဟိ … နာ့ပိုစ် ပါတယ်တော့် သာဓုပါတော်။
ရများရရင် တစ်ရွာလုံးကို Double Black လောက်မတိုက်ဘူး
သိန်း ၂၀ ကျော်တန် Henessy Paradise ကို တစ်ယောက်တစ်လုံးတိုက်မှာ
ဘလက်ကြီးအတွက်ကတော့ XO တစ်လုံး ….
လက်ငင်း လက်ငင်း …..
အဟဲ ရရ မရရပါ ဖတ်သူများလို့ဝမ်းသားပါတယ်။
မဖြစ်မနေဆိုရင်တော့ ပြောတာပါ။အကောင်းလွန်နေသလိုပဲ ဒီPost နှစ်ခုက။
မိကေဇီရဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က တတိယဆင့်လောက်မှာ လိုက်နေတယ် ခံစားမှု့ကို
( ကျုပ်အထင် ) သူတို့ (၃) ယောက်လုရမှာပဲ။
ကိုရွှေညာသားရဲ စာပေ ပိုစ့်ကြီးက…
ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ ဆု..ရ မရ… မသေချာသေးခင်မှာကိုက…
Editor’s Choice ဆု.. ရထားတယ်ဗျို့ .. .။
တကယ်ပြောတာလား ကိုရွှေညာသား… ဘွာတေးမရဘူးနော်…
ဗေဒကဝိဆြာဆာမိနဲ့ပေါင်းပြီး ၂၀၀၈-ခြေ/ဥလို ဒဲ့ဟောကိန်းထုတ်လိုက်မယ်…
Henessy Paradise ကို တစ်ယောက်တစ်လုံးတိုက်စေသတည်း… အဟိ အဟိ
ဒူဝေ … ဝေ ….
ဖတ်ရွေး စကာတင် ပါဝင်သူများ …
အမြန်ဆုံး ပျောက်ကင်းအောင် လုပ်ထားကြပါလေ …..။
ဗေဒဆြာ ဥဥဆာ … ဆိုတာက
ဦးလူကြီး ထက် ဆိုးသဗျ … ဟီဟိ
ဗေဒဆြာ ဥဥဆာ က အတွင်းရေးတွေပါဟောမယ်တဲ့…
ကွန်မင့်ရေးချင်ပေမယ့် ရေးချိန်မရတာရယ် – ကော်နက်ရှင်ကြောင့် ရေးလိုက်တာလေး မတက်တာတွေရယ် များနေလို့ စိတ်ထဲ မချင့်မရဲ ဖြစ်ရတယ်။
မချင့်မရဲဖြစ်မနေပါနဲ့ ဦးပါ… အားရပါးရ မန့်ချလိုက်ပါခင်ဗျ…
ဂျူလိုင်လအတွက် ဦးပါအကြိုက်ဆုံးက “……” ပါလို့… ဟီ ဟိ
သောကြာဂြိင်္ုလ်ခုံက ရာဇမတ်ကွက်တော့ ဘာဖြစ်လဲဟင်…..
(တော်တော် ဒုံးဝေးတဲ့ အာလဖွားဂျီးမို့ပါ)
အာတီဒုံ… သောကြာဂြိုလ်ခုံမှာ ရာဇမတ်ကွက်ပါလျင် သိပ်ဆိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ်… လေဖမ်းဒန်းစီးသမား.. တဖက်က တွေးလျင်ဒေါ့ အနုပညာဗီဇရှိလယ်.. အဲဒီဖက်မှာ ထူးချွန်နိုင်တယ်.. ဓာတ်သနသမား ဖြစ်နိုင်တယ်..။ ရုပ်ပိုင်းထက် ဆိတ်ပိုင်းအားသံဒယ်..။
ဦးကျောက်စ်ရဲ့ မစ်ဒယ်လ်အိစ်ဂြိုလ်ခုံဆို သိပ်ထင်ရှားလွန်းလို့ ထိုးစစ်မှာ ထူးချွန်တတ်တယ်။ ဥပမာ – လက်ဝှေ့ထိုး..၊ လှေထိုး၊ ဘောလုံးရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှူး..
ပုံ – ဖမ်းဒန်းစီး ဗေဒကဝိဆြာကြောင်
အင်း ဒီတစ်လတော့ ကြောင် ရန်မရှာပါလား။
အမှန်ကတော့.. Best Web Awards ဆိုတဲ့.. ကက်တဂရီကြီးလုပ်ထားပေးတာမို့.. မလိုဘူးလည်းထင်မိတယ်..။
ထူးပါဘူး.. ဖတ်ကောင်းနေတာနဲ့.. လုပ်လိုက်ပါ့မယ်..။
အမ် ညက်ချိတောင် visit ဖစ်တွား တယ်။
ဒီ သူကြီးတော့ အိပ်ချင်မူးတူး နဲ့။ ရေနွေးအိုး ထတယ် နေသလား။ lol:-)))
Oppps .. I see. :-)))
သဂျီးဒွန်ကင်း (Don King) ကတော့ ဝါသနာကို မဖျောက်နိုင်ဘူး…
သောကြာဂြိုလ်ခုံအားကောင်းရင် ကျန်းမာရေးကောင်းသတဲ့… အန်တီဒုံ
ကျန်တာကတော့ ကိုရင်ကြောင်ကြီးပေါတဲ့အတိုင်း… ဟီဟိ
*** တော်ပါသေးရဲ့ ဒီကြောင် ပေါက်ကရတွေပြောမယ်မှတ်တာ… အားဟိ
ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့နေ့ ရောက်လာပြန်ပြီ နော်
ရင်ခုန်စွာစောင့်မျှော်ရင်း ဘယ်သူရရ လက်ခုပ်တီးပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါ
တစ်လတစ်ခါ ရင်ခုန်ရတာ အရသာပေါ့ လုလုရယ်…
ဖတ်ရွေးဆန်ကာတင်ပို့စ်ထဲက ကလောင်ရှင်လုလုလည်း ရင်ခုန်ပါ…
ဒိန်း တပ် တပ် ဒိန်း :s:
ကျောက်စ် ရဲ့ ဗေဒင် ကို အတွေ့
ဗဒင် ရဲ့ “တို့နှစ်ယောက် ထက်ဘဲ ဗေဒင် ဆရာ ဟာ ပိုသိနိုင်မလား” ကို ပြေး သတိရပါ့။
ဗေဒင်ဆရာ အပြော ကြည့်ရတာ
အဂါင်္ သား (သို့) သမီး ထီပေါက်မယ် ထင်ရဲ့။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဟာသ နဲ့ ဖျော်ဖြေအစွမ်းပြခဲ့တဲ့ ကျောက်စ် ကို ရော + ပါရမီဖြည့်ဖက် မဒမ် ကျောက်စ် ကိုပါ ကျေးဇူးပါ။ (နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ် ဖြစ်နေတော့ ပူးထားရတာ)
နောက်တော့ ရွာထဲ အမှတ်တရ စာသားလေး တွေ ချ ခဲ့ ကြ တဲ့ ပိုင်ရှင်များ အားလုံး အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။
စာတစ်ပုဒ် ရေးရတာ အချိန်ရော စိတ် အား ပါ စိုက်ထုတ် ရတာမဟုတ်လား။
နောက်တော့ ဖတ်ရွေး စိတ်ကြိုက် ဇကာတင် ဆိုက်ကြီး ဂိုက်ကြီး များ (ဒါကြောင့် ဇကာ မှာ တင်ကျန်တာကိုး ) အတွက် ပိုပြီး ဂုဏ်ယူပါတယ်။
သူရို့ ထဲ က ဘယ်သူ့ ဆိုက် က ပို အကြီးဆုံး ဆိုတာ ဗေဒင် မမေးဘဲ မှန်း မယ်။
(ပြီးခဲ့တဲ့ လ ကတော့ လွဲ တယ်)
အဖြေ စောင့်နေပါတယ် ဆြာ ကျောက်စ် ရှင့်။
သများက သိပ်ပြီး စိတ်ရှည်တာမဝုတ်ဝူး။
အကြီးဆုံးတွေကို ဂုဏ်ပြုပေးတဲ့ ဆရာမဂျီးမြစာကလေးကို ကျေးဇူးပါခီည…
စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ခတ္တသီးခံ စောင့်ဆိုင်းပေးပါခီညာ… အဟိ အဟိ
သများမှာလည်း ဩာဇမတ်​ကွက်​ ၂ခုပါတယ်​… ​သောကြာဂြိုဟ်​ခုံဆိုတာ ဘယ်​နားလဲ…
လက်မအောက် လို့ ထင်တာဘဲ မကြည်စင် လေးရဲ့။ :-)))
ဒွန်ကင်းးး ကို ရေတိုက် လိုက် ကြပါ။
ကောင်းးကာင်းး မနိုးးပဲ ပွဲသွင်းးးနေတယ်။
” @$&*ရင်ခုန်ရလွန်းလို့ ရူးမှာပဲ *#@$%&
အာ့ သီချင်းးဘူဆိုတာလဲ တိဒေါ့ဝူးးး
မေမေ ရေကျေးဇူးပါ မီးကိုအင်္ဂါနေ့ မှာမွေး ပေးလို့ 
မျိုးကျော့ မှာ ကျွန်တော်နဲ့ တူတဲ့ ချစ်စရာအကျင့်တစ်ခုက
အဲဒါ ၀ိုင်ဝိုင်း သီချင်း။
Double Black ကို တစ်ပုလင်းလုံး ပါးစပ်ထဲလောင်းချလည်း
နောက်ကျလို့ အပေါက်ဝကနေ ပြန်မလွှတ်ပါဘူး ကိုဂျီးဘက်လတ်ရယ်…
ဘယ်အချိန်မန့်မန့်… လှည်းတန်းကစောင့်နေသူပါခီည… အဟိ
ကိုဂျီးဘက်လတ်ကို သနားလို့ Double Black ကို ပါးစပ်ထဲ သွန်လိုက်တော့မယ်…
သင်သည် မောင်ကျောက်ခဲ၏ Double Black ကိုမျှော်လင့်စရာမလို
အကျွန်ုပ်မှ သင့်အား Henessy Paradise တစ်လုံး လူကြုံပါးလိုက်ချေပြီတည်း
သင်သည် ၀ါတွင်းကာလ ဘုရားသွား ကျောင်းပြန် အားပတ်လွတ်အောင် သုံးဆောင်လေလော့
ကိုယ်ဖြစ်လျှင် ကိုယ်ခံလေတော့ ယမမင်းမှ စောင့်နေလိမ့်မည်တည်း
ယခုပြုရ ကုသလကြောင့် ……
ငါ၏စာများသည်လည်း Henessy Paradise ကဲ့သို့တန်ဖိုးရှိပါစေသတည်း
ဖတ်ရွေးဆြာဒွေ ခေါင်းစားမဲ့လ နေမှာပဲ ။
အူးကျောက်စ်စကားအတိုင်း ဂဇက်ပိတ်သတ်မေတ္တာခံဟိုဗေဒင်ဆြာဂျီးဟောတာပဲ စောင့်ကြည့်တော့မယ်ဗျာ ။
ဇဂါးမစပ် ကြုံတုန်းလေး သောကြာဂြိုလ်ခုံတော့မသိ ကျော့်မှာ ခါးပတ်တော့ပါသဒဲ့ ။
ဘာဖစ်တတ်ဒုန်း ဟင်င် ။
ခါးပါတ်ပါရင်တော့ ခပ်တင်းတင်းလေးဆွဲထား ကျွတ်ကျလိမ့်မယ်…
အဟိ… အဲဒါပါရင် ရိုက်သတ်လို့တောင် မသေဘူးတဲ့… စမ်းကြည့်ပါလား…
ဆန်ကာတင် ပို့စ်တွေ အကုန်ကောင်းပါသတဲ့..အကုန် ဖတ်ကြည့်ပါအုန်းမယ်..အခုလေးတင် ဆုရတဲ့သူကြေငြာတဲ့ ပို့စ်ဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ..ဒီပို့စ်လိုပဲ…ရယ်ရလွန်းလို့ ချောင်းပါ အဆစ်ဆိုးသွားတယ်..အဟွတ်
လိုက်လဲလိုက်တဲ့ စုံတွဲ ဟဲ့
မောင် ရေးရင် မယ်ရီ မယ် .. ချောင်ဆိုး လို့ သီး ချင်သီး စေ။
စားလုံးပေါင်းစစ်ခိုင်းရင်း ဖတ်ရတာ အူပါနာ… စာလုံးပေါင်းတွေက တမင်ရေးထားတာကလွဲ..တစ်လုံးစ နှစ်လုံးစပဲ မှားတော့တယ်..အတော်တိုးတက်လာတယ်လို့ ဆိုရမယ်..အရီးကျိကျိရယ်
ဘဇာကြောင့် ကိုယ်တော့်အတွင်းရေးကို လူသိရှင်ကြားလုပ်ဘိသနည်း…
အေးအေးချေးချေး အိမ်ပြန်ထမင်းစားမှ ပြောလည်းရတာမင့်… အဟိ